Madaxweynaha da’da ah ee Zimbaabwe oo GABAR DHEYLAHA AROOSAY DHALASHADIISA - Hablaha Media Network
HMN:- Hogaamiyaha dunida ugu da’da weyn, Robert Mugabe oo madaxweynaha ka ah dalka Zimbabwe, ayaa u dabbaal degay sannadguuradiisii 93aad.
Xafladda dhalashadiisa waxaa ka qayb galay kumanaan taageerayaal ah, taasoo ka dhacday meel dibadda ka ah magaalada Bulawayo.
Wuxuu ku labbisnaa koofi iyo shaar ay xaaskiisa naqshadaysay, wuxuuna sheegay inuusan carrabka ku dhufan doonin cidda beddelaysa.
Xisbul-xaakimka ZANU-PF ayaa la sheegay inuu aad ugu kala qaybsan yahay cidda beddeli doonta madaxweynaha oo u muuqda inuu xilka heyn doono illaa uu ka geeriyoodo.
Mr Mugabe ayaa xafladiisa dhalashada inta badan kursi ku fadhiyey, mararka qaarna ay indhihiisu wey is galayeen.
Dhowr keeg ayaa la keenay xafladda, kuwaasoo midkood uu ku dhawaa boqol kiilo, ayadoo loo sameeyey sida khariidadda Zimbabwe.
Dadka Mugabe dhaliila ayaa waxa ay sheegayaan in xafladdaasi oo lagu soo warramaya in ay ku kacayso kharash gaaraya 800,000 oo doolar ay tahay mid aan habboonayn maadaama waddankaasi uu haatan wajahayo abaar.
Madaxweyne Mugabe ayaa awoodda dalkaasi hayay tan iyo sanadkii 1980-kii, xilligaasi oo Zimbabwe ay soo afjartay xukunkii caddaanka laga tirada badnaa, ayna si buuxdo xornimada uga qaadatay Britain.
President Robert Mugabe and his wife Grace attended the 21st Movement Celebrations to mark the 93rd birthday celebrations at Matopos National Park in Mateleland South,Bulawayo,Zimbabwe,February 25,2017.(Xinhua/Stringer)